ပီတိ: October 2008
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်ကပေါ့… အိမ်မှာနေတော့လည်း ပျင်း၊ စာရေးဖို့ဆိုလည်း ပျင်း၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း မတွေ့ချင် တစ်ယောက်ထဲ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မယ်စိတ်ကူးပြီး စင်ကာပူရဲ့ အမျိုးသား သစ်ခွဥယျာဉ်ရှိရာ Botanic Garden ကို မာစီးဒီးစ် စီးပြီး ထွက်လာပါသည်။ အဲ… အထင်တော့ စွတ်ကြီးမသွားပါနဲ့ SMRT Bus လိုင်းက မာစီးဒီးစ်ဘတ်စ်တွေသုံးလို့ပါ… မဟုတ်ရင်တော့ Volvo နဲ့သွားတယ်နော်… :P
ရောက်သွားတော့ နေ့လည် ၁နာရီကျော်.. နေကပြင်းပြင်း လူက ပျင်းပျင်းနဲ့ ကင်မရာကိုထုတ် ဟိုချိန်ဒီချိန်လုပ်တော့ သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှာ ပျော်ပွဲစားထွက်လာသော ပျိုမေတို့က ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ပေါ့… သူတို့ကိုတော့ Shutter အနာခံပြီး မရိုက်သေးဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ပြုံး… ဘာအရင် လက်စမ်းရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီး တွေ့ရာ ပန်းကိုချိန် စပြီးရိုက်တော့… ဒီပုံလေးတွေ ထွက်လာတာပေါ့… တကယ်တော့ အပျော်တမ်းရိုက်လို့သာ စီးပွားဖြစ်သာရိုက်ရင် တော့လား….
(ဘယ်သူမှ ၀ယ်မှာမဟုတ်ဘူး… :D)
နေရောင်ခြည်အောက်မှာ သီချင်းဆိုနေတဲ့အဖွဲ့က တစ်ဖုံ
တစ်ပွင့်ထဲလှနေတဲ့ စိန်ပန်းလေးက တစ်သွယ်
အစိမ်းရောင်တံတိုင်းကြီး အခြားခံနေရတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့...
သားငယ်ကိုချော့မြူနေတဲ့ မိခင်ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်...
ဆက်ငေးနေရင် ပူပြင်းတဲ့နေရောင်အောက်မှာ မခံနိုင်တော့တာနဲ့ သွားလိုရာ အရပ်ကိုသာ အမြန်ရောက်အောင်သွားခဲ့တော့... ဟောဒီ အပေါက်ဝကိုရောက်ခဲ့ပြီ...
အထဲကိုမ၀င်ဖြစ်သေးပဲ ကနေတဲ့ ချစ်စရာ အမျိုးသမီးလေးကို ဟောဒီလို ကြည့်...
အထဲကိုရောက်ပြီး ပန်းကလေးတွေကလှလွန်းလို့ ပြောစရာ စကားလုံးတောင် ရှာမရလို့ .. ပုံလေးတွေကိုသာကြည့်ပါတော့နော်...
ဟော... ပန်းကလေးတွေကို ကြည့်လို့ မောလာတော့ ဟောဒီအဆောက်အဦးထဲဝင်ပြီး နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်တွေပေးထားတဲ့ ပန်ပွင့်လေးတွေကြည့် ရင်း အပန်းဖြေပါတယ်...
အဲသည်လိုနဲ့... နေစောင်းလို့ ညနေရောက်... အိမ်ပြန်ချိန်သို့ရောက်လာပြီ...
သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မှီ စာအုပ်ဖတ်နေတာ...
ဘာလို့ ဒီလို တံခါးတွေပိတ်နေရတာလဲ...
(တက်ဂ် ခံထားရတဲ့ အချစ် အကြောင်း ဘယ်လိုမှ ရေးလို့ မပြီးလို့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ ဆားထပ်ချက်လိုက်ပါတယ်... )
Posted by P.Ti at Thursday, October 30, 20085comments Links to this post
Posted by P.Ti at Tuesday, October 21, 20086comments Links to this post
ဖြစ်သလို ပို့စ် မှာရေးခဲ့တဲ့ အစားအသောက်တွေကို စားဖြစ်တဲ့အတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အခုအောက်ကပုံတွေကတော့ သိပ်မစုံသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရိုက်ထားတာ ရှိတဲ့ပုံတွေကိုပဲတင်လိုက်ပါတယ်။
အသစ် ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ထပ်တင်ထားပါတယ် (19 Oct 2008)
ဗလာကြာဇံကြော်၊ ကြက်ဥကြော် နဲ့ ကော်ဖီ
Golden Mile Food Court က နေ့လည်စာများ
နာမည်ကြီးပြီး တန်းအကြာကြီးစီရတတ်တဲ့ ချီလီမီး (ငရုတ်ချဉ်ရည်ခေါက်ဆွဲ)
စာရေးတုန်းကမပါခဲ့တဲ့ လျောင်ဝမ်မြန့် လို့ခေါ်တဲ့ mini-pot noodle
အစာပလာစုံလင်လှတဲ့ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ (lor mee)
ယောင်းမတောင်တိုအောင် အသံစုံထွက်ပြီးကြော်တဲ့ ချာကွေ့တယောင်း (ဆန်ခေါက်ဆွဲကြော်)
တရုတ်ကြီး ဒီလို ခုန်ခုန်ပြီး ကြော်တဲ့
ဂျပန်လိုခေါင်းပေါင်းတွေဆောင်းပြီး (အဲဒီနေ့ကတော့ တစ်ယောက်ပဲဆောင်းပါတယ်) ရောင်းတဲ့
ဂျပန်စာ - Chicken Teriyaki
ဒါကတော့ Peninsula Plaza မှာ စားဖြစ်တဲ့ စမူဆာ နဲ့ လက်ဖက်ရည်
တနေ့က အိမ်မှာ ကိုယ်တိုင်ချက်စားဖြစ်တဲ့ ကြက်သား ပဲငပိချက်
အောက်ကပုံတွေကတော့ 742 North Bridge Road မှာရှိတဲ့ House of Briyani ဆိုင်က ဒန်ပေါက်ထမင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်က အင်္ဂါနေ့ မှ စနေနေ့ မနက် ၁၁နာရီမှ ည ၇ နာရီအထိ ဖွင့်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ နဲ့ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ပိတ်ပါတယ်။
အာဖကန်နစ္စတန် ထမင်းနဲ့ ဆိတ်သား ဒန်ပေါက်
တူရကီ ထမင်းနဲ့ ကြက်သားဒန်ပေါက်
Posted by P.Ti at Saturday, October 11, 2008 10 comments Links to this post
အဝေးက မီးရောင်က တဖြတ်ဖြတ်နဲ့…
စားသောက်၊ ဆော့ကစား၊ ကျောင်းသွားခဲ့တာ
ကစားမက်ပြီး ဆုတွေကိုလည်း လိုချင်တတ်လာ
အခု ရှေ့ဂဏန်းပြောင်းတာ နှစ်နှစ်ကျော်ကြာ
အဝေးကအိမ်မှာ တစ်ခုခုလိုတယ်လို့ ခံစားမိရင်း
အခုရော ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲ ထပ်ခါတွေးတော့….
အဲဒီ ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲကပဲ ရောင်ပြန်ဟပ်နေတယ်လေ…
Posted by P.Ti at Thursday, October 09, 20083comments Links to this post
တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဓာတ်ပုံများ ။ ။ ဓာတ်ပန်းချီ
Posted by P.Ti at Friday, October 03, 20085comments Links to this post